နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: IT News (300609)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:11 AM
မီးမီးချစ် June 30, 2009 at 1:36 PM
တို့1 ကွ..း))
မီးမီးချစ် June 30, 2009 at 1:38 PM
ဒါဆို 2011 မှပဲ ဖုန်းလဲ တော့မယ်..း)
Ko Boyz June 30, 2009 at 1:46 PM
မုန့်ဆီကြော်က အဝေးကြီးပါ အန်တီရယ်။ ဆေးလိမ်းလိုက်ပါ။ :D
နွေးနေခြည် June 30, 2009 at 2:36 PM
ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ကို လူ့ဦးနှောက်ရဲ့ အတွေးနဲ့ စေစားခိုင်းစေနိုင်မယ့် စံနစ်အောင်မြင်လို့ကတော့ တက်ထိုင်ပြီး ရန်ကုန်ပြန်မယ်လို့ တွေးလိုက်မယ် ဟဲဟဲး)
Ko Boyz June 30, 2009 at 2:38 PM
လမ်းမှာ ကုန်ကျမယ့် ဆီစားရိတ်၊ စားစရိတ်၊ နေစရိတ်၊ အိမ်သာစရိတ် ထည့်မတွက်တော့ဘူးလား နွေးနေခြည်ရယ်။
နောက်ပြီး အဲဒီစနစ်က အောင်မြင်နေပေမယ့် စီးပွားဖြစ် ထုတ်နိုင် မထုတ်နိုင်ကတော့ မသေချာသေးဘူးကွဲ့...။
khin oo may June 30, 2009 at 7:25 PM
KTz June 30, 2009 at 8:43 PM
oh, steve jobs has been sick??? dun know abt it.
if ya dun mind, plz share news in brief everyday like this, especially business news....hee im so lazy to read the paprer :D thx!
p.s. myout pyaw chin ma hote par.
Rita June 30, 2009 at 10:24 PM
တော်သေး တို့ကတော့ Nokia E66 ပဲ သုံးတယ်။
(ထက်ထက်မိုးဦး ကြော်ညာဝင်သလို ဖတ်ပါ)
PAUK June 30, 2009 at 10:54 PM
MrDBA July 1, 2009 at 12:31 AM
iPhone ပေါင်ပေါ်တင်ပြီး သီချင်းနားထောင်လို့ကတော့ သေပြီဆရာ။
Ko Boyz July 1, 2009 at 12:33 AM
အော်.. ဖြစ်ဖူးတယ် ထင်ပါ့...။ ပေါင်တွင်းကြောတွေ ပြတ်ထွက်ကုန်တာ ပြောတာပါ။
Anonymous October 27, 2009 at 7:13 PM